Avelao Andriamanitra hanangana teboka amin'ny vavaka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Avelao Andriamanitra hanangana teboka amin'ny vavaka
Avelao Andriamanitra hanangana teboka amin'ny vavaka
Salamo 68: 1 Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony; ary izay mankahala azy handositra ny tavany. 68: 2 Tahaka ny fanely setroka no fanelinao azy; tahaka ny savoka mihelina eo alohan'ny afo, dia maty koa ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra.
Ny drafitry ny fahavalo manohitra ny anao anjara tsy maintsy miparitaka anio hariva Amin'ny anaran'i Jesosy. Avelao Andriamanitra hitsangana hivavaka dia Teboka hivavaka amin'ny ady, dia vavaka ho valifaty. Io ny karazana vavaka ivavahanao rehefa reraka ka nanosika anao hanaraka ny devoly sy ny mpiasany. Rehefa mivavaka am-bavaka ianao anio hariva, dia ho fongotra amin'ny asan'i Jesosy ny asan'ny ratsy rehetra amin'ny fiainanao. Hitsangana izao Andriamanitrao izao ka hamely ny fahavalon'ny anjara-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Manompo an'Andriamanitray izahay valifaty, Dia antsoina hoe Jehovah ilay lehilahy mpiady izy. Izy no Andriamanitra manasazy ny faharatsiana sy mampahory ny ratsy fanahy. Betsaka ny kristiana mijaly noho ny faharatsian'ny ratsy fanahy, naheno tantaranay ny olona novonoina noho ny fahombiazana kely azon'izy ireo fotsiny, marobe ny mpino no iharan'ny faharatsiana sy ny ody. Na inona na inona mety hitanao, dia tsy maintsy mitsangana ianao ka milaza amin'ny devoly, Ampy izay. Mandra-pialanao amin'ny vavaka, tsy hitsangana amin'ny famonjena anao ny Andriamanitrao. Tokony hametraka ny olon-dratsy any amin'ny alàlan'ny herin'ny vavaky ny ady ianao. Mivavaka ho anao aho anio, raha ampianao izany, avelao Andriamanitra hitsangana hivavaka, ny faharatsian'ny ratsy fanahy amin'ny fiainanao dia hofoanana mandrakizay ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy am-pinoana izany vavaka izany, ary raiso am-bavaka fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Tompoko, mamoaka anjely mirehitra aho mba hanaisotra izay rehetra mahatafintohina eo amin'ny lalako mankany amin'ny fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Tompo ô, sokafy ny masoko ara-panahy hahitako ny asan'ny fanapahana ary tokony ho 7 dingana alohan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy
13. Ry Tompo, amin'ny fanahinao, manome hery ahy handresy ny ady ara-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Nambarako fa ny zana-tsipìka rehetra amin'ny fanjakan'ny haizina dia mikendry ahy hiverina ny mpandefa amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Avelao ny hery hiakatra elatra tahaka ny Eloma hianjera amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ry Tompo, esory daholo ny karazana tahotra amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Manafaka ny afon'Andriamanitra handrehitra ny lavenona izay boky ratsy rehetra miaraka amin'ny anarako ao anaty tarika jesus amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Tompo, vonjeo amin'ny ratsy rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy
19. Ny herin'ny maizina miady amin'ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy
20. Tsy ho menatra amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Izaho tsy mandà tsy ho gaga, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'Andriamanitra velona, ​​amin'ny anaran'i Jesosy.
Hahazo fifaliana sy firavoravoana aho; ny alahelo sy ny fisentoana dia handositra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Mahazo famonjena amin'ny fanahy rehetra sy ny fahoriana rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Avelao ho torotoro daholo ny tohatra rehetra an'ny fahavalo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Mandidy ny anjelin'ny Tompo aho hanameloka ny ankohonako amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Manasa ny fanahin'ny fifangaroana sy ny fisarahana aho amin'ny herin'ny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy.
28 Ary mandefa ny zana-tsipik'Andriamanitra aho amin'ny fahefana rehetra mandresy ny fiadanako, ny fifaliako ary ny fanambinana, ao amin'ny
29. Mandidy ny rivotra sy ny masoandro ary ny volana aho hihazakazaka mifanohitra amin'ny fisian'ny demonia rehetra ao amin'ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Nofoako ny ozona rehetra, izay tsy fantatra na tsy fantatro tamin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy
31. Tompo ô, asehoy. . . nofy, fahitana ary fitsaharana, izany no hampivoatra ny aiko.
32. Ny volako, rehefa voavain'ny fahavalo, dia avoaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Ry Tompo ô, omeo ahy ny fiatoana tsy manam-petra, amin'ny tolo-kevitro ankehitriny.
34. Mamatotra sy mandositra aho, ny fanahin'ny tahotra rehetra, ny fanahiana ary ny fahakiviana amin'ny anaran'i Jesosy.
35 Tompo ô, avelao hianjera amin'izay rehetra manohana ahy ireo fahendrena avy amin'ireto raharaha ireto.
36. Tapaka ny fitodihan'ny fanahy mamitaka sy famitahana amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Tompo ô, apetraho ao an-tsain'ireo manohana ahy ny ataoko mba tsy hiharan'ny fahatsiarovan'ny demony ny fahatsiarovana azy.
38. Izaho dia manome endrika ny fahavalon'ny ankohonany ary saro-piaro, mpandraharaha amin'ity raharaha ity amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Ry demonia, esory amin'ny tongotrao ny tongotrao, amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
40. Afon'ny Fanahy Masina, diovy ny aiko amin'ny marika ratsy apetraka amiko, amin'ny anaran'i Jesosy
Misaotra anao Jesosy noho ny famalian'ny fivavahako
Previous lahatsoratra40 Mivavaka amin'ny mamatonalina mahery vaika
Next lahatsoratra30 Ireo laharana vavaka momba ny fanompoana
Franklin Reginald Carter 8 aprily 2021 Amin'ny 6: 22 hariva
mety hampiely ny fahavalonao koa
Franklin Reginald Carter 8 aprily 2021 Amin'ny 6: 25 hariva
misaotra ireo teboka vavaka
Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 1 Novambra 2018